डाक्टर साप, ऊ मर्न लागेको छ :: Press Chautari ::
डाक्टर साप, ऊ मर्न लागेको छ
प्रथमतः यहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु।
हजुरले मलाई चिन्नु हुन्न। तर म हजुरलाई चिन्दछु। मेरो चिनाई केवल राजा चिनाई हो बस्।
पत्रपत्रिका, अनलाईन, टेलिभिजनहरुमा खुब देखेको/ पढेको र सुनेको छु यहाँको बारेमा।
यहाँले निःस्वार्थ रुपमा नागरिकलाई पुर्‍याउनु भएको सेवाको मुल्याङ्कन जन–जनले गरेका छन्।
त्यो सम्मानको हैसियत र हकदार तपाई हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरको जय जयकार गर्छन। म पनि भन्छु डाक्टर केसी साप–यहाँको जय होस्।
अझ सडक, गल्ली र चोक चोकमा निस्केर अरमानी एक्सचेञ्जको महँगो गन्जी पाखुरा सम्म सुर्काएर भन्न मन छ–डाक्टर केसी –जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। राजनीतिक संगठनका युवा, विद्यार्थीहरुका हुल, सबै पेशाकर्मी, नागरिक समाजका सप्पै सप्पैलाई एउटै चोकमा डाकेर हजुरको त्यो शहरमा रथ यात्रा गर्न मन छ।
तर, विवशता म यो पातालमा छु। यो पातालभूमीको एउटा महँगो अस्तपतालमा मेरो नम्बर कुर्दै समाचारको लागि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा औला घुमाउँछु। हजुरको निन्याउँरो अनुहार। कतै आक्रोस। कतै बिद्रोह सुन्छु, देख्छु। म मेरो पालो कुर्दै अघि सर्छु।
म पालो नजिक पुग्दा मेरो कल्पनामा तपाई आउनु हुन्छ। दुखाई आधा कम हुन्छ। म मेरो सम्पूर्ण समस्या एकै पंक्तिमा बान्की मिलाएर भन्न सक्छु। तपाई बुझ्नु हुन्छ। तर यहाँ यथार्थमा मेरो जबरजस्तीको अंग्रेजी भित्रका डाक्टरहरुले खै त्यत्ति सजिलो गरी कहाँ बुझ्लान्। बेलामा राम्रो अंग्रेजी सिकिँएन। उत्ती राम्रो मास्टर पनि थिएनन् क्यार डाक्टर साप मेरो स्कुलमा।
सबैले तपाईको स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेछन्। जाँबो म नाँथेको फेसबुकको भित्तामा त गोडा दुएक सयले “गेट वेल सुन” भनेर लेखेका छन् तपाई माथि त लाखौंको सदासायता छ डाक्टर साप। सारा देश र जनताले भनि रहेका छन् –
“डाक्टर साप, उठ्नुस, तपाई त आफै ओखती पो हो। ”
हो त। हजुर, यसरी ढल्नु हुन्न। त्यसरी गल्नु हुन्न। राजनीतिको आगो यसरी बल्नु हुन्न।
हजुरको माग जायज छ। विधीको शासन र नीतिको कार्यन्वयनमा तपाईको पक्षपातीहरु घर–घरमा छन्। चोक चोकमा राँके जुलुस निकाल्न तयार छन् उनीहरु। तर तपाई स्वयम् यसरी ढल्नु भयो भने त डाक्टर साप समस्या झन पहाड पो बन्ने भो त..।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले किन यसो त त्यसो गर्‍यो। कुलपति–उपकुलपति या मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले किन र कसरी गर्‍यो? त्यसको पनि त कुनै सर्वोच्च निकाय होला। छानविन र कानुनी उपाचार होला। गलत कामको नतिजा गलत नै हुन्छ। यसको जिम्मा नागरिकलाई छोडेर डाक्टर साब, उठनुहोस् न।
“सेतो एप्रोन लगाएका डाक्टर नर्सहरु बिरोध गर्ने सडकमा”–अघि फेसबुकमै यस्तो देखे। खै मलाई त राम्रो लागेन डाक्टर साब,किन किन ती सेवादाताहरु सडकमा पोखिएको। जसलाई सेवाग्राहीले भगवान भनेर दिल खोलेर पुज्छन् उनीहरु नै विरामीको शैय्या छोडेर सडकमा सेताम्मे छरपस्टिएको किन किन निको लागेन मलाई त।
दोजिया महिलाहरु ब्यथा खप्न नसकेर हजुरकै अस्पतालको भित्ता छामी रहेछन्। भीरबाट लढेर ढाड र खुट्टा ठुन्काएकाहरुका घाउमा किर्ना पलाई सक्यो। बाण परेको आनाकानी गर्दै एपेन्डिक्सको पेट चिर्न अस्पताल छिर्नेहरुका पेट पट पटी फुटुन लाग्यो।
यत्तिबेला हजुर र हजुर जस्तैका नाडीले तिनका नाडी छाम्न पाए मात्रै पनि तिनले कति आनन्दको अनुभूति गर्थे होला डाक्टर साब?
डाक्टर साब, उठनुहोस न ऊ साँच्चै मर्न लाग्यो।
हजुर उठ्नु भयो भने त सयौं बाँच्छन् रे।
Monday, January 20 , 2014 | सोमवार, माघ ६, २०७० | सेतो पाटीमा प्रकाशित
सोमवार, २०७० माघ ०५ गते ०८:१३ / Monday, Jan 20, 2014 8:13 am